Spain n'okpuru snow: ọnọdụ okpomọkụ nke -8ºC hapụ ụzọ 60 belata | Netwọk Mgbasa Ozi
Spain n'okpuru snow: okpomọkụ gbadara -8ºC hapụ 60 ụzọ
Foto - Laprensa.hn
Ọ dị ka ọ gaghị abịa, mana Oge oyi mechara biri na SpenO mekwara ya na »kacha mma» ụzọ ga-ekwe omume: na akpụrụ na snow na ugwu nke mba ahụ na ezigbo oyi na ndị ọzọ.
Mercury na temometa ọ nwere ike ịdaba na ogo asatọ n'okpuru efu, na-eme ka ọnọdụ ha kawanye njọ na ha bi n'obodo ndị dị ka Teruel, Cantabria ma ọ bụ Burgos.
Oge oyi bụ oge nke, anyị agaghị agọnahụ ya, nwere ike ịhapụ ọdịdị ala dị egwu, mana anyị ga-anwa ịkpachara anya, ma anyị ga-aba n'ụgbọala ma ọ bụ na anyị chọrọ ịga njem. Ma ọ bụ na, na-aga n'ihu, n'ógbè Teruel, a hapụwo ha n'ụzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ niile agafere. Na mgbakwunye, n'isi obodo ha kwụsịtụrụ njem ọha na eze na, iji nwee ike ịgbasa n'okporo ụzọ ndị bụ isi, achọrọ ịdọ.
Na Madrid, kwụsịtụrụ ọrụ nke Cercanías akara C-9 n'etiti Puerto de Navacerrada na ọdụ Cotos kwụsịkwara n'ihi snow. N'akụkụ aka nke ọzọ, na Asturias enwere ihe karịrị puku mmadụ 10 ndị ọkụ eletrik na-agwụ n'ihi oke ifufe ahụ, ma ha nwekwara okporo ụzọ iri na abụọ mechiri maka njem.
Na Catalonia enwere okporo ụzọ anọ mechiri emechi, nke bụ GIV-4016, GIV-5201, C-28 na BV-4024. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ bụ iwu na ị ga - eji agbụ agagharị n'ụzọ 44, ihe karịrị mmadụ 230 na - aga n'ihu na - enweghị ọkụ eletrik n'obodo Ribera d'Urgellet, na Lleida.
Ma ọ dịghị ihe na-adịru mgbe ebighi ebi na nwa oge a, n'ezie, ọ bụghịkwa. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na taa Wednesde na-efe ikuku na-asọ site na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke ime Europe, nke ga-eme ka ọnọdụ okpomọkụ daa na 10ºC n'akụkụ dị elu nke ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, na Fraịdee ọnọdụ ga-amalite ịhazi. Ma lezie anya, ọ gaghị abụ oge ikpeazụ oyi nke afọ.
Maka ozi ndị ọzọ, anyị na-akwado ịgụ ọkwa nke AKEMKỌ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Spain n'okpuru snow: okpomọkụ gbadara -8ºC hapụ 60 ụzọ
Ikuku dị ọcha nwere ike ịka njọ na nsonaazụ okpomoku ụwa